Kooxda Jwxo-shiil, Goormay Eritrea ku Biirtay? – Rasaasa News
Feb 25, 2010 Eritrea, Jwxo-shiil, ONLF
Google alert, ayaa ii soo qabtay dadweyne Eritrean ah baa banaanbax Geneva ku sameeyey, saa waxaa ii muuqda calankii ururka ONLF, waxaan is idhi calankani calankii Eritrea ma ahee waa sidee, saa waan sii akhriyey, saa waaba laysku jiraa. bal gal Hanqaar.com
Xukuumada Eritrea oo aduunka fardheeraatay ka noqotay, ayuu aduunka oo dhan heshiis ku gaadhay in xukuumada Eritrea la saaro cuna qabatayn. Xukuumada Eritrea waxaa lagu shaabadeeyey in ay tahay xukuumad argagixiso [terrorist state], oo ka takooran aduunka intiisa kale.
Waxaa kale oo ummada Ogadeeniya si gaar ah ugu guntan in xukuumada Eritrea ay tahay xukuumad waxyeelo wayn iyo argagax u gaysatay horusocodkii halganka ummada Somalida Ogadeeniya.
Cunaqabataynta la saaray xukuumada Eritrea, ayaa waxay saamaynaysaa dadweynaha Eritrea ee ku nool dalkooda gudihiisa. Waxaa cunaqabataynta ka soo horjeeda dadweyne Eritrean ah oo iyagu degan dalalka reer galbeedka. Waxayna banaanxyo ka sameeyeen dhawr dal iyaga oo codsanaya in cunaqabataynta cuntada lagu badalo wax kale oo xukuumada wiiqi kara.
Waxaa nasiib daro weyn ah in dad sheeganaya magaca ummada Somalida Ogadeeniya in iyaga oo wata calanka halganka Somalida Ogadeeniya waa ONLF ay ka qayb galaan banaanbaxa. Iyaga oo wata boodha ay ku qoran yihiin erayo lidi ku ah Maraykanka, islamarkaasna taageeraya Afwerki.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa ka mid ah dadka ka qayb galay Cabdiraxmaan Maadeey, oo kooxda Jwxo-shiil u matala arimaha dibada iyo kuwo la mid ah.
Dadweynaha Eritrea, ayaa waxay ka dhigeen banaanbax dhawr dal sida Doha, Geneva iyo dalka SanDiego. Horin wareersan oo uu wato Maxamuud Nuur [Garaabo], ayaa dalka Maraykanka Eritreanka raacay, Qadar Xuseen Nuur [Bacuudo], oo Jwxo-shiil u ah warfaafin iyo in uu wato iyo Gineva oo Cabdiraxman Maadey [Abtidoon], koox uu wato ay ka qayb galeen banaanbaxa Eritrea.
Waxaa naxdin weyn iyo siyaasad xumo ah in dad wata calanka ONLF, ay dadka Eritrea oo dalkooda dartiis [as a nation] u banaanbaxaya ay isa soo dhextaagaan dad wata calanka ururka ONLF. Arintaas oo aduunku meel uu u qaado garanwaayey iyo waliba goorta ay ONLF ku biirtay dalka Eritrea, erayada lidiga ku dalka Maraykanka ee ay xubnahani wateen ayaa dhib weyn u keeni karta ururada ku hawl gala magaca Ogaden.
Arintan ma ah mid bilaabatay eegga ee awalba waanu ogayn, haatanse waxay cadayn u tahay intii aan hore u ogayn in Eritrea ay walaaqday halgankii iyo ujeedadii ururka ONLF oo maanta cidla taagan.
Dadweynow banaanbax iyo shirarka kooxda Jwxo-shiil, ee aad maqashaan ama aad aragtaan waxaa sameeya dad Eritrean ah oo doonaya in ay Itobiya kula dagaalamaan magaca ururka ONLF iyada oo adeegsanaysa kooxda Jwxo-shiil.
Waxaa jirta odhaa Somaliyeed oo ah “saaxiibkaa waxa uu yahay ayaad tahay,” Eritrea waxaa lagu qiray in ay tahay xukuumad argagixo ah [terrorist state], Jwxo-shiil iyo afarta la socotana waa la mid, sidaasi daraadeed waxaanu dadweynow idiinka digaynaa in ayna idin galaafan.
Dr. Dolal In Aanu Dilo Go,aa Baanu ku Gaadhnay!